परिवारले घरमा कुरिरहेका थिए तर दुवै जना बिच बाटोमै अस्ताए ! – Khabarhouse
परिवारले घरमा कुरिरहेका थिए तर दुवै जना बिच बाटोमै अस्ताए !
Khabar house | १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०८:३९ | Comments
काठमान्डौ : नायिका महिमा सिलवालको निधानले सिंगो फिल्मी छेत्र शो’कमा डुबेको छ ।दिदि बैनीको प्रतिक्षा गरि रहेका परिवरमा रुवाबासी चलेको छ। सामाजिक संजालमा महिमाको त्त्स्बिर राख्दै लेखेका सब्दहरुले उनि कति प्रिय थिइन भन्ने सहजै अनुमन गर्न सकिन्छ। महिमाको नि’धनमा धेरै कलाकारहरुको आखा रसाएका छन।
नायिका महिमा सिलवालको बसको ठक्करबाट मृ’त्यु भएको हो । धादिङको गजुरी गाउँपालिका २ चाम्बासमा बुधबार साँझ बससँग ठो’क्किएर स्कुटरमा सवार सिलवालको मृ’त्यु भएको थियो । बुधबार साँझ करिब ५ बजेर ४५ मिनेट जाँदा उनी सवार स्कुटरलाई विपरित दिशाबाट आइरहेको बसले ठ’क्कर दिएको थियो । दु’र्घटनामा परि उनको घ’टनास्थलमा नै मृ’त्यु भएको प्रहरी नायब निरीक्षक जनक बस्नेतले जानकारी दिए ।
बस्नेतका अनुसार स्कुटरमा सिलवाल सहित उनकी बहिनी सर्मिला सिलवाल पनि सवार थिइन् । उनीहरु काठमाडौँबाट चितवन घर जाँदै थिए ।महिमाको घ’टनास्थलमा नै मृ’त्यु भएको थियो भने सर्मिला को उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याउने क्रममा बाटोमा मृ’त्यु भएको बस्नेतले बताए । दिदि बैनिकै मृ’त्युको खबरले परिवारमा रु’वाबासी चलेको छ । भरतपुर महानगर पालिका–१२ शिवनगरकी महिमाले ‘का’रवाही’ चलचित्रबाट डे’ब्यु गरेकी थिइन् ।